विष्ट र भट्टलाई गृहको वचावट कारबाही
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले निर्मला पन्तको वलात्कारपछि हत्याको घटनामा कमाजोर भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख उपरीक्षक एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्टलाई बर्खास्त गरेको छ । तर,उनीहरूलाई पुनः सरकारी सेवामा फर्कन सक्ने बाटो भने
नवरात्रको छैटौँ दिन : कात्यायनी देवीको पूजा गरिँदै
काठमाडौं– नवरात्रको छैटौँ दिन आज दुर्गा भवानीको छैटौँ शक्ति स्वरुप कात्यायनी देवीको पूजा गरिँदैछ । देवी कात्यायनी माता पार्वतीको सौर्य अवतार मानिन्छ । कात्यायन ऋषिकी पुत्री कात्यायनी नामले लोकमा प्रसिद्ध भएकी हुन् । कात्यायनीलाई साहसको प्रतिक मानिन्छ । दान लगायतका पुण्यकर्म तथा शुभकार्य गर्दा आसुरीवृतिका
आर्थिक समृद्धिका लागि एनआरएनएको साथ चाहिएको छःप्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणका गैर आवसीय नेपालीको सहयोग जरूरी भएको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरूको विश्व सम्मेलनलाई काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार, निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए प्रधानमन्त्री ओलीले
सिन्धुलीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस सुनकोसीमा खस्यो १ जना मृत्यु, ७ घाइते
सिन्धुली । सिन्धुलीको मरिणबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस सुनकोसी गाँउपालिकाको ५ रिठ्ठेभीरबाट सुनकोसी नदीमा खस्दा १ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा परेर सात जना घाइते भएका छन्। मृतक र घाइतेको सनाखत भइ नसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटले बताएको छ । घटनास्थलबाट ७ जनालाई उद्धार गरी उपचारकालागि धुलीखेल तर्फ
दाने बोहरा / यतिबेला हुम्ला जिल्लाका स्याउ बारी रातम्य भएका छन् । किसानहरू दशैं आएभन्दा पाकेका राताम्य स्याउबारी हेरेर दंग छन् । लटरम्म फलेका स्याउका रुखहरू उत्तिकै मनमोहक छन् । हुम्ली स्याउन किसान मनग्य आम्दानी हात लाग्ने आशाले निकै खुसी देखिन्छन् । अधिकांश स्याउ भादौं दोस्रो हप्ता देखि पाक्न सुरू
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसकेको बताएका छन् । मालारानी शैक्षिक तथा धार्मिक महोसत्व आयोजक मूल समारोह समिति काठमाडौंले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा
काठमाडौं ७ मा बामदेवको जित सुनिश्चितःसांसाद रामवीर
काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरले नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले गौतमलाई चुनाव जिताउन आफू दिलो ज्यान दिएर लाग्ने पनि बताए । उनले भने, ‘जसरी पनि अब वमदेवलाई जिताएरै छोड्छौँ । त्यसका लागि
हिल्सा नाका औपचारिक सञ्चालनमा
दाने बोहरा/हुम्ला, चीनसँगको सिमाना जोडिएको हुम्लामा पहिलो पटक अध्यगमन कार्यालय स्थापना भएको छ । संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चीनसँग सिमाना जोडिएको हिल्सामा अध्यागमन कार्यालयको मंगालबार उद्घाटन गरेपछि औपचारिक रुपमा अध्यगमन कार्यालयको स्थापना भएको हो । औपचारिक रुपमा हिल्सामा
वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारी गोरखापत्रको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारी गोरखापत्रको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई ४ वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । नेपाली पत्रकारिताको ‘सम्पदा’ गोरखापत्रलाई अझ पठनीय बनाउने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने भण्डारीले बताए । उनले भने,‘गोरखापत्रलाई
नयाँ नोट सटही सुरू
काठमाडौं । बडा दशैंको अवसर पारेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आज देखि नयाँ नोट सटही सुरू गरेको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रति व्यक्ति २७ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ नोट बजारमा प्रवाह गरेको छ । आइतबारदेखि
हायस र ट्रक ठोक्किँदा छको मृत्यु, १७ घाइते
नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकास्थित शम्शेरगञ्जमा यात्रुबाहक हायस (माइक्रोबस) र ट्रक आज बिहान एकापसमा ठोक्किँदा छ जनाको मृत्यु भएको छ । दाङको तुलसीपुरबाट अमिलिया हुँदै नेपालगञ्ज आउँदै गरेको रा१ख १६६२ नम्बरको हायस र नेपालगञ्जबाट दाङतर्फ जाँदै गरेको लु१ख ७७२९ नम्बरको ट्रक आज बिहान करीब
सरकारको गियर फेर्ने बेला आयोःप्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकतालाई उल्टयाउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउदै त्यस्ता तत्वलाई परास्त गर्ने बताएका छन् । सरकारको कामका विषयलाई लिएर अनेक टिप्पणी गरिएको भन्दै सरकारको गेयर बदलल्नु पर्ने बेला आएको प्रचण्डले बताए । पार्टी भातृ संगठन र तल्लोतहका कमिटी एकीकरणको
एनसेलको आँगनमा मेडिसिटीको आँखा शिविर
ललितपुर । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले बिहिबार एनसेलका झण्डै २०० कर्मचारीको आँखा परीक्षण गरेको छ । संस्थागत कर्मचारीका निमित्त शुरू गरिएको ‘वान डे विथ कर्पोरेट’ अभियान अन्तर्गत एनसेलका कर्मचारीको आँखा परीक्षण गरिएको हो । सो क्रममा नेपाल मेडिसिटीकी नेत्र विभाग प्रमुख डा. पूजा लामा सहितको टोलीले आँखाको
बैंकिङ कसुरमा फरार तत्काली किष्ट बैंकका एमडी पक्राउ
काठमाडौँ। किष्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवाली पक्राउ परेको छन् । बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएर फरार रहेको उनलाई महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले जानकारी दिए । उनलाई काठमाडौं ल्याइसकेको
माधव नेपालको असहमतिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘हावा लाग्यो पात हल्लियो भन्दै त्यसपछि दौडिनु जरूरी छैन्’
काठमाडौं । राष्ट्र संघको ७३ औं महासभामा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली बिहीबार साँझ काठमाडौं फर्किएका छन् । असोज ६ गते ७३ औं महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री ओलीको टोली आज काठमाडौं फर्किएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग छोटो कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले
दैनिक पत्रिका जलाएको घटनाप्रति महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर कैलालीको अत्तरियामा आज वितरणका लागि ल्याइएका केही दैनिक पत्रिका जलाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । बुधबार बिहान वितरणका लागि कैलालीको अत्तरियामा राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर, दि काठमाडौं पोष्ट, नागरिक, अन्नपूर्णपोष्टलगायतका पत्रिका
काठमाडौंमा ५ किलो सुनसहित १ व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका बालाजु तिनपिप्लेबाट पाँच किलो सुन सहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले बुधबार बिहान रसुवाको केरुङ नाका हुँदै काठमाडौं भित्र्याउन लागेको भन्ने सुराकीका आधारमा सुन सहित १८ वर्षीय सोबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। बालाजुको तीनपिप्लेमा चेकजाँच
नेवि संघद्वारा कञ्चनपुर जिल्ला बन्द
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका अपराधी पक्राउ नपरेको विरोधमा नेवि संघले मंगलबार कञ्चनपुर जिल्ला बन्दको गराएको छ । निर्मलाको हत्याप्रति सरकार उदासिन रहेको भन्दै दबाब स्वरुप बन्द आयोजना गरिएको हो । निर्मलाको हत्या भएको
धनगढीमा आन्दोलनको स्वरुप फेरियो
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभाले राजधानी र नाम तोकेको निर्णय विरुद्धको आन्दोलनको स्वरुप फेरिने भएको छ । दशैंको माहोललाई हेरेर नागरिक समाज संघर्ष समिति धनगढीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आमहड्ताललाई स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताएको छ । सोमबार राति ८ बजे धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र
काठमाडौंमा विशेष सुरक्षा योजना, थप ३० हजार प्रहरी परिचालन हुने
काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्षित गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेर विशेष सुरक्षा योजना अघि सारेको छ । परिसरले दशैँ, तिहार र छठपर्वमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन विशेष सुरक्षा योजना बनाएको हो । सम्मेलनमा परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार लामाले चाडवाडलाई लक्षित गरेर काठमाडौँको
कञ्चनपुर फेरि आन्दोलित
काठमाडौं । निर्मला हत्याबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग राख्दै कञ्चनपुरका महिला आन्दोलनकर्मी आन्दोलित भएका छन् । निर्मलाको न्यायका लागि दवाबमूलक संघर्ष समिति बनाएर अधिकारकर्मी फेरि आन्दोलित भएका हुन् । कञ्चनपुरका राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी,
नेपालको राजनीतिक परिवर्तन विश्वकै लागि अनुकरणीयः प्रधानमन्त्री ओली
न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणको विश्वकै लागि मौलिक उदाहरण भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, महासभाको ७३ औँ महाअधिवेशनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा नेपालको राजनीतिक
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकका मेयर नृप ओडले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रदेश नं ७ का सांसदले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । प्रदेशको राजधानी गोदावरी सार्ने प्रस्ताव विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरिएको हो । राजधानी सार्ने आन्दोलनका क्रममा मेयर ओडले प्रदेश सरकार र सांसदहरुलाई
७ नम्बर प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम, राजधानी कैलालीको गोदावरी
धनगढी । प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामाङ्कनका लागि गठित विशेष सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएको छ । सासंद तारा लामा तामाङको नेतृत्वमा गठित संसदीय समितीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरिएको हो । संसदीय समितीले प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरी र नाम सुदूरपश्चिम
अस्तित्व मेटिने खतरामा पृथ्वीनारायण शाहको नासो, टेकोका भरमा वीरताको प्रतीक !
नुवाकोट– देशको मुख्य ऐतिहासिक सम्पदाहरुको सूचीमा पर्छ नुवाकोटको साततले दरबार क्षेत्र । विदुर नगरपालिका २ मा पर्ने भूकम्पले भत्काएको यही सम्पदाको पुनःनिर्माणमा सरकारको चासो नपुग्दा यसको अस्तित्व नै मेटिने आशंका उब्जिएको छ । भूकम्पले भत्काएको ४१ महिनासम्म पनि सम्पदा पुनःनिर्माणमा सरकारको ध्यान
घिमिरे निर्विरोध अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको बिहिबारको बैठकले आयोगकै आयुक्त घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्तमा अनुमोदन गरेको हो । घिमिरेले समितिमा प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजना तथा उनको योग्यता, क्षमता
१ लाख घुस खाने वीरगञ्ज महानगरपालिकका अधिकृत अख्तियारको फन्दामा
वीरगञ्ज । एक लाख घुस लिएको भन्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृतसहित तीनजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेगले नियन्त्रणमा लिएको छ । अयोगको हेटौंडा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । शिक्षा शाखा अधिकृत (विद्यालय निरीक्षक) मञ्जुर आलम, प्राविधिक सहायक नायब सुब्बा
‘चाडबाडको मुखमा बजारमा सुनचाँदीको चरम अभाव’
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौँ । चाडबाडको मुखमा बजारमा सुनचाँदीको चरम अभाव भएको छ । सरकाले कच्चा पदार्थ बढाउन नसक्दा सुनचाँदीको अभाव भएको हो । नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश लकान्द्रीले बुधबार अमरवाणी अनलाइनसँग कुरा गर्दै सरकारले कच्चा पदार्थ नबढाएर सुनचाँदीको क्षेत्रलाई
राजेन्द्र महतोले भने,‘साधु सन्त बन्न राजनीति गरेका होइनौं’
नेपालगञ्ज । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले राजपाको मुख्य कार्यसूची संविधान संशोधन नै भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपालगञ्जमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै संविधान अधुरो, अपुरो रहेकाले मधेशी, दलित र जनजातिका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । संविधानलाई समयानुकूल